Omasipala bagubhe olohulumeni basemakha | News24
Omasipala bagubhe olohulumeni basemakha
PHOTO: Umeya waseHibiscus Coast uCllr Nomusa Mqwebu (kwesokunxele) kanye noMeya wase Mzumbe uCllr Sydney Gumede bebambisene isibani somlilo emgubhweni weminyaka engu16 yokubhusa komasipala basemakhaya.
UNYAKA ka-2016, uwunyaka weshumi nesithupha (16) kwaqala ukusebenza kohulumeni basekhaya besebenza ngokwentando yeningi. Lonyaka futhi uwunyaka wokugubha umkhankaso iBack to Basics Campaign esiqede unyaka kusukela yasungulwa. Ukujabulela konke lokhu omasipala Umzumbe neHibiscus Coast Municipality kanye nabanye omasiphala abangaphansi kwe-Ugu district Municipality benze imigubho ngoMgqibelo. Omasipala bakhumbule yonke imisebenzi asebeyenzile ukushintsha izimpilo zabantu kanye nezinto ezithuthukise imiphakathi. Kukhanyiswe isibani somlilo eyisikhombiso nesakha ithemba lokuthi omasipala bazoqhubeka ukuthuthukisa izimpilo zabantu nemiphakathi yabo eminyakeni ezayo.
IHibiscus Coast yona iqale imigubho ngokuthi ikhanyise isibani endaweni yaseGamalakhe ehholo lomphakathi eZ.G, kwathi ngokuqhubeka kosuku kwayiwa endaweni yakwaMasinenge kwase kuphindelwa khona eGamalakhe.
Umasipala waseMzumbe wona uhanjelwe ungqongqoshe weZokuthuthukiswa koMphakathi uNkk. Weziwe Thusi okhanyise ngokusemthethweni ugesi endaweni yakwaMgayi khona eMzumbe. Okhulumela umkhandlu waseMzumbe uMnu. Trevor Khanyile uthe izindlu ezingama-600 zizothola ugesi ekuhambeni kwesikhathi.